FOIBE FITSIRIHANA FIARAKODIA : Mpanao hosoka 8 tra-tehaka teto an-drenivohitra
Noho ny ezaka fanadiovana sy fialana tanteraka amin’ny kolikoly ataon’ny eo anivon’ny foibe fitsarana fiarakodia (DGSR) dia hita fa maro ireo mpanjifa no mitondra ny fiarany mba hotsirihana manerana ireo ivon-toerana fitsarana fiarakodia. 8 juillet 2019
Tsy kely lalana anefa ireo mpanao ratsy ary mahita hevitra mandrakariva. Nandritry ny hetsika fidinana ifotony tampoka nataon’ny teo anivon’ny “DGSR “ ary niarahana niasa tamin’ny “direction de police judiciaire” ao amin’ny Toby Ratsimandrava ny 02 hatramin’ny 05 jolay 2019 teo dia tambajotra 2 mpanao hosoka amin’ny fanaovana antontan-taratasy momba ny fitsirihana ara-teknika no sarona. Miisa 08 ireo olona voasambotra ka ny 05 tamin’ireo dia nanao taratasy hosoka momba ny « attestation de non affectation de vehicules au transport à titre onéreux », raha ny tena marina dia ny « centres fiscaux » no tompon’andraikitra amin’ny famoahana azy.
Ny 03 kosa dia manamboatra ary manome taratasy na « visite technique parallèle” hosoka ivelan’ny ivon-toerana fitsarana fiarakodia. Tratra nandritra ny fisavana ny tranon’ireto olon-dratsy ireto ny antontan-taratasy maromaro hosoka, toy ny « imprimé DGSR, fiche contre visite commune urbaine », “cachet” sy ireo fitaovana informatika maromaro toy ny “imprimante” sy solosaina. Marihina fa niteraka fatiantoka eo amin’ny fampidiram-bola ho an’ny fanjakana sy ny foibe fitsarana fiarakodia ny toe-javatra toy izao raha ny fanazavana voaray hatrany. Mampitandrina ary manentana ireo olona mbola zatra ny lalan-dririnina araka izany ireo tompon’andraikitra ao amin’ny “ DGSR” fa tsy handefitra mihitsy amin’ny tsy fanarahan-dalàna toy izao. Vonona kosa fa hanome kalitao tsara indrindra ho an’ny mpanjifa manao ny fitsirihana anefa izy ireo.
Jiolahy mpandroba izy roalahy maty voatifitra fa tsy tanora mpianatra AMBALAKISOA TOAMASINA (215) 20 janvier 2020 Nahatratra hosoka miisa 89 tamin’ny fidirana ho miaramila ETAMAZAORO JENERALIN’NY TAFIKA (194) 20 janvier 2020 Naato tamin’ny asany ny Lehiben’ny Pompiers FIHOTSAHAN’NY TANY TENY AVARADOHA (133) 21 janvier 2020 Miatrika famotorana lalina ny tale jeneraly teo aloha ORINASA KRAOMITA MALAGASY (126) 22 janvier 2020 Nahitana fatim-behivavy tsy nisy loha novonoina tao Analaradjy SAINTE-MARIE (116) 20 janvier 2020 Tovolahy iray namoy ny ainy, novonoina tamin’ny fomba feno habibiana MANANARA AVARATRA (97) 22 janvier 2020